ဟောဒီမှာ SEXY ဓါတ်ပုံလေးတွေပါဗျာ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဟောဒီမှာ SEXY ဓါတ်ပုံလေးတွေပါဗျာ။
ဟောဒီမှာ SEXY ဓါတ်ပုံလေးတွေပါဗျာ။
Posted by black chaw on Jan 3, 2012 in Photography, Travel | 22 comments
၂၀၁၂ ထဲရောက်တာ ၃ ရက် မြောက်နေ့လေးပါ။ စာလည်းကောင်းကောင်းတစ်ပုဒ်မှ မရေးဖြစ်သေးပါ။
ကိုသစ်မင်း ကိုတူးဆွပြီးတာနဲ့ တံခါးကြီးက ဟင်းလင်းကြီးပွင့်နေပြန်တာကို တွေ့ရပြန်တော့လည်း တံခါးဘက်
ပြန်လှည့်ရပါသည်။ ဒီနေ့တော့ ပို့်စ်တစ်ပုဒ် ဖြစ်အောင်တင်မည်ဆိုတော့ လူသောက်မြင်ကတ်မယ့် ပို့စ်မဖြစ်ချင်တာရယ်၊
အငြင်းပွားစရာတွေ မပါချင်တာရယ်ကြောင့် ခရီးသွားဓါတ်ပုံလက်ကျန်လေးတွေ ပြန်တင်ဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်နေတဲ့ စိတ်ကလေးတွေ သစ်လွင်လန်းဆန်း ဖလန်းဖလန်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
ခင်ဗျာ ဆက်က်စီ အော် အားလုံးမကြည့်ကြမှာ စိုးလို့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖမ်းစားလိုက်တာပါ။ အာဟီး။
ဤ ပုံကိုကြည့် ၍ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ရေးပါ။ (၅ - မှတ်)
၂၀၁၁ သင်္ကြန်တွင်း ချောင်းသာ နေ၀င်ချိန် ပါ။
ချောင်းသာ ပင်လယ်ပြင်ပါ။ စိတ်ထဲလန်းဆန်းမလားလို့ တင်လိုက်တာဗျာ။
ကိုစိန်သော့ ရိုက်ချက်မျိုးနဲ့ ချောင်းသာ ။
ခရီးသွားရင် လမ်းတွေ့တာ အကုန်လက်ဆော့တဲ့ ဘလက်ရဲ့ ရိုက်ချက်။
ဒါလည်းလမ်းဘေးက အပင်တွေကို ရိုက်ထားတာပါ။
လမ်းဘေးဝဲယာ မြင်ရာလက်ဆော့ တဲ့ ဘလက်။
ဘာမှတော့ မဆိုင်ဘူး။ ကြိုက်လို့ဗျာ။
အပေါ်ဆုံးကပုံကို ခံစားပြီးဇာတ်လမ်းရေးရင် ၅ မှတ် ဟုတ်လား
တစ်မှတ်မှမယူဘူး အလကားရေးပေးမယ် နောက်တာ
အောက်ဆုံးပုံလေးအတွက်တော့ ဇာတ်လမ်းရှိတယ် ဘဘဘလက်ရဲ့
ကိုဘလက် နဲ့ မဒမ်ဘလက် တို့ နှစ်ပတ်လည် အမှတ် တရ နေ့အတွက် ခရီးသွားဘို့ တိုင်ပင်တော့ ချောင်းသာဆိုပြီး အဖြေထွက်လာတယ် ၊ ခရီးတစ်လျှောက်လုံးရော ချောင်းသာရောက်တော့ပါ အဆင်လဲပြေပြေ ကြည်ကြည်နူးနူး နဲ့ ၊
နောက်နေ့ မနက် ရေဆင်းကူးမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ကိုဘလက်ကြီးက ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ကောင်မလေး ချောချောလေးကို တွေ့ပြီး လိုက်ငေးရင်း သဘောတွေကျ နေတာ မိန်းမပြောတဲ့စကား မကြားတော့ဘူး မိန်းမထွက်သွားတာလဲ မသိလိုက်ဘူး ကိုဘလက် ကောင်မလေးရဲ့ အလှကနေ ရုန်းထွက်လိုက်နိုင်ချိန်မှာ မိန်းမကဘေးမှာ မရှိတော့ဘူး လိုက်ရှာကြည့်တော့ မိန်းမရဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံပဲ တွေ့တော့တယ် အဲဒီမှာ ပူထူပြီး တွေးလိုက်မိတာက မိန်းမက ရွာထဲဝင် စာဖတ်နေကြ စင်ကာပူကကောင်မလေးလို သူ့ကောင်လေး ပစ်သွားတာနဲ့ တိုက်ပေါ်က ခုန်ချသလို ရေထဲဆင်းပြီး တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ပါပြီ လို့ တွေးမိပြီး အကြီးအကျယ် ငို နောင်တတွေ ရသွားတယ် မိန်းမရေ ငါ မှားသွားပါတယ်ကွာ နောက်တစ်ခါ ကောင်မလေး ချောချောလေးတွေ တွေ့ရင် လိုက်မကြည့်တော့ပါဘူး အရင်က ကတိပေးလိုက် ပျက်လိုက် လုပ်ခဲ့မိပေမဲ့ အခုတော့ ဒီကတိကို သေချာထိန်းပါတော့မယ် ဆိုပြီး အပီအပြင်ငိုနေတဲ့ အချိန်မှာ မဒမ်ဘလက်က ရေထဲက မဟုတ်ပဲ တခြားနေရာ ကပေါ်လာတယ် ဘယ်ကပေါ်လာမယ်လို့ ထင်လဲ ရွာသူားတွေ မှန်းကြည့်ဘို့ ချန်ထားခဲ့မယ်…..
(ကိုဘလက် ကြီး စိတ်ထဲမှာတော့ နောက်တစ်ခါ ကောင်မလေး ချောချော မတွေ့ခင်အထိ မင်းကိုပေးထားတဲ့ ကတိကို ထိန်းပါမယ်ကွာလို့ စိတ်ထဲက ပြောရင်း မဒမ်ဘလက်ရဲ့ ဖိနပ်လေးကို အမှတ်တရ ရိုက်လိုက်တယ်)
လွှမ်းဘလက် ရဲ့ “ လမ်းဘေးနားက ပန်းကို မပန်ကြဘီ ” ပေါ့နော်
ပွဲလန့် တုန်း ဖျာဝင်ခင်း..အဲအဲ….
ရေထဲဆင်းတုန်း ဖိနစ် အလစ်သုတ်ချင်လို့ မလား
အယ် ကိုပေ ကိုဇာဂိ ကိုပေါက်ဖော်ကြီးတို့ ရေချိုးနေကြတယ် တော်ကြာ မျှော့ကပ်နေမယ်နော့
ပုံကိုကြည့် ၍ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ရေးရမယ်ဆိုတော့
စင်ဒရဲလားတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဖိနပ်က ၂ ဖက်ကျန်ခဲ့တာ ဆိုတော့
ကိုဘလက်က ရွာသူရွာသားတွေကို စဖို့အမှတ်တရလား
သေချာတာကတော့ ကိုဘလက်ကိုယ်တိုင် ဖိနပ်ကို သီးသန့်ယူပြီးရိုက်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဘေးမှာ မဒမ်ဘလက်ရှိလိမ့်မယ်။
ကိုဘလက်က မဒမ်ဖိနပ်ကို ရိုက်ချင်နေတာ ဒါပေမဲ့ မဒမ်ဘလက်က မရိုက်စေချင်ဘူး
နောက်မှ ရိုက်ခိုင်းတယ် ပြီးတော့ မဒမ်ဘလက်ကိုယ်တိုင် စောင့်ကြည့်နေတယ် ရေထဲကနေလေ
လိမ်တယ်ညာတယ် လူညာကြီးရယ် ယုံအောင် ရွှီးတတ်တယ် ..
နာတော့ အညာမိပြီ …
အဲဒီ ဘိနပ်လေး နှစ်ဖက်က
သီရိမင်္ဂလာ ဈေး သစ်ကြီးရဲ့ မြစ်ဆိပ်ကို
ကျွန်တော် ကင်မရာကိုင်ပြီး လက်သွားဆော့တော့
မိန်းမတစ်ယောက်က မြစ်ထဲရေဆင်းကူးဖို့ ချွတ်သွားတာဗျာ။
အဲဒါနဲ့ စိန်လွင်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး သွားသတိရပြီး ရိုက်ထားလိုက်တာ
ဒါပေမယ့် စဉ်းစားလို့ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးဗျို့။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကပဲ ဖိနပ်ချွတ်ပြီး ရေထဲဆင်း သတ်သေသွားသလိုဘာလိုလို ဟေးဟေး။
ခင်ဗျားကွန်းမန့်က တော်တော် တိုတယ်ဗျာ။
ဟိုဟာလိုချင်လို့ လာပေမယ့် ဟိုဟာမဟုတ်မှန်းသိသွားရင်လည်း
ဒီဟာကို ကွန်းမန့်ပေးလို့ ရပါတယ်ဗျ။ ဟားဟား။
သြော် .. ဦးဘလက်.. ဦးဘလက် .. မရှက်ပါနဲ့ ။ ကိုရီးယား ကားတွေထဲကလို မဒမ်ဘလက်ကို ဂုံးပိုးခေါ်သွားတယ်ဆို လဲ ခေါ်သွားတယ်ပေါ့… ဘေးမှာ ဦးဘလက်ခြေရာတွေ့တယ် ….. :grin: :grin:
ဖိနပ်ဖြူလေး ကြည့်ရင် ကိုရင့်ခမျာ ရင်ထဲ
လှပ်လှပ်နဲ့ ၅မှတ်ရဖို့ ကြံနေကြောင်းပါ ဖလာ့…
ကိုဘလက်ရေ ဂျပ်ဆင်ကြီးရယ် ချောင်းသာပင်လယ်ပြင်ကြီးရယ် ယူသွားတယ် …..
ကိုဘလက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင်လေ” အား “တခုကိုအမြဲတွေ့ရတယ်……
အင်း…. ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ ပုံတွေထဲမှာ ရှိတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ အရာတွေကိုလေ တခါထဲ ထင်းခနဲမြင်နေအောင် မြင်ရတယ်… ဥပမာ မင်းကွန်းပထိုးတော် ပုံတချို့ ဆို သူ့ချည်းပဲ တန်းမြင်ရတယ်….
ဆူးလေပုံဆို လည်း အဲ့လိုခံစားရတယ် … ဂျပ်ဆင်ဆိုလည်း ထီးထီးချည်း မြင်လိုက်ရတယ်….အားပေါ့ အဲ့လိုအရာတွေမှာ အားတခုပါနေသလိုမျိုး ….(ဒါက ပညာမျက်စိနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး အနုပညာကို ခံစားတတ်တဲ့ ရိုးရိုးသာမန်လူတယောက်ရဲ့ သာမည ခံစားမိတာလေးပါ)
လေးပေါက်ရဲ့ ပုံတွေကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ အရာတွေ အားလုံး ပေါင်းစပ်ပြီး သဘာဝအလှကို မြင်အောင် အနုစိတ်ပြီး လှတာ အခုတင်တဲ့ “ငြိမ်သက်ခြင်းမှ လွင့်ပျံလာသော အတွေးများ” ကပုံလေးတွေ ဆို သဘာဝကို အနုစိတ်တာ …..
မစ္စတာဂီကတော့ ဘယ်အရာကိုပဲ ရိုက်ပြ ရိုက်ပြ သူစေစားရာကို ကြည့်တဲ့သူကို ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ် ရသစုံပေးတယ်…….သူက နည်းပညာပိုင်းမှာ မှော်အောင်ထားပုံရတယ်…
တယောက်တမျိုးတော့ အနုပညာဆန်ကြတယ်…ပုံတွေတိုင်းတော့ လည်း တမျိုးစီလှနေတာပါပဲ…
ပုံလေးတွေက အနှစ်ကြီးတွေပါပဲ။ ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် စိတ်ကို လန်းဆန်းစေတယ်။ နောက်ပြီး ဂျပ်ဆင်ကတော့ အမြဲသွားနေကျဆိုတော့ သိပ်ပြီး မဝေးကွာလှပေမယ့် သတိရမြဲပါပဲ။ (ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာရယ်… လွမ်းမိတယ်)
ပုံလေးတွေက တော်တော်လန်းပါလား ကိုဘလက်ရေ
နွယ်ပင်လဲ အောက်ဆုံးပုံလေးကို သဘောကျတယ် …………
ကိုဘလက် ကိုဘလက် တက်လည်းတက်နိုင်ပါတယ် ဗျာ ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်မိတာကိုက ငါ့အမှား စတာပါ ပုံလေးတွေကလန်းပါတယ် အောက်ဆုံးကပုံကိုအကြိုက်ဆုံးပဲဗျာ
ကျမလည်း ဒီအတိုင်းတွေးမိတယ်။အောက်ဆုံးပုံ Judson ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
Sexy ရဲ့  အခြား informal meaning ရှိနေတယ် Jonas ရေ…
It describes something that attractsalot of interest and attention.
E.g: For most people, grammar isn’tavery sexy subject.
ဘယ်တုံးက ရိုက်လိုက်တာလဲဗျ …
ဘွဲ့ဝတ်စုံကိုကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတူယူတဲ့သူဆိုတော့ ….
ဂျပ်ဆင်နားမှာ ဦးဘလက်နဲ့ တွေ့ဆုံမိရင်ကောင်းမှာပဲဗျာ ………………………
၂၀၁၁ အောက်တိုဘာလထဲက ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါဗျာ။
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ကတင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာတောင်
ပုံသေးလေးတစ်ပုံ ပါခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီလင့်မှာ ပြန်ကြည့်ဗျာ။
အပေါ်ဆုံးပုံကို စာစီရရင် (အမှတ်တော့ မရဖို့ သေချာတယ်)
ကျောက်စရစ်ခဲတွေ တွေ့လို့ မြစ်ကမ်းနားပဲ ဖြစ်ရမယ်။
ဘေးနားမှာ စက္ကူစတွေ့လို့ မြန်မာပြည်သူားတွေ စည်းကမ်း မရှိဘူးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်သလိုပါပဲ။
ဖိနပ်ဖြူဖြူလေးကို ကြည့်ရတာတော့ ဖိနပ်ပိုင်ရှင်ဟာ ချောမချော မသိပေမယ့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မယ်လို့ မှန်းနိုင်တယ်။
(၂၀၁၁ သင်္ကြန်တွင်း ချောင်းသာ နေ၀င်ချိန် ပါ။) ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရွာဦးတက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ခဲ့ရတော့ဗျာ……….
ဂျပ်ဆင်အပါအ၀င် တက္ကသိုလ်ဝန်းတစ်ခုလုံး အနာဂတ် လူငယ်များကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးစေချင်တယ်ဗျာ. ကျောင်းသားတွေရဲ့ အနာဂတ်ပညာရေး ဂျပ်ဆင်အတိုင်းမြင့်မြင့်မား မြင်ချင်တယ်ဗျာ…….
sexy ဓါတ်ပုံဆိုတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လမ်းစရမယ်ဆိုရင်
ပုံ(၁) ရေစပ်မှာ ကောင်မလေးတယောက် ချွတ်ထားတာကို တွေ့တယ်.. (ဖိနပ်)။
ပုံ(၂) စတွေ့တဲ့ငတိ ၂ကောင်က နေဝင်ရီတရော မှာ အပီချောင်းကြပြီ..။
ပုံ(၃) ချွတ်ပီးရေထဲဆင်းသွားတယ် (ဖိနပ်)။
ပုံ(၄)ဘလက်ချောရဲ့ဖွချက်ကြောင့် ဂေဇက်ရွာသားတွေ တစုတဝေး အုပ်အော်သောင်းနင်းနဲ့ လာကြည့်ကြ..။
ပုံ(၅-၆-၇)ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြည့်ရင်မကောင်းလို့ ခြုံတိုးလို့ကြည့်ဘို့ သဂျီးကဆော်သြ…။
ပုံ(၈) မန္တလေး ကအဖွဲ့တွေက ငှက်စီးပြီးပါတ်ရှာမယ်ဆိုဘဲ…။
ပုံ(၉)အော်…ဒီအဖြစ်လေးတွေက ဂေဇက်အဖွဲ့သားတွေ ချောင်းသာသွားတုံးက အဖြစ်လေးတွေပေါ့သူငယ်ချင်းရယ်..လို့ ဂျပ်ဆင်ရှေ့မှာထိုင်ပြောပြီး ရယ်ကြရတယ်…..။
ဒါဆို ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတခုရတာပေါ့……….။
ဆရာချောလက်ရာတွေထဲမှာ ဒီဓတ်ပုံတွေကိုအလိုက်ဆုံးပဲ(အရောင်စိုတယ် ဖိုးကတ်ပြတ်တယ်)
ရှည်ရှည်လာပါပြီ … မှားသွားရင် ခွင့်လွှတ် ..
ဦးဘလက်ပုံတွေ ကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမယ့် လိုနေတာလေးတွေ ရှိတယ်
တားဂက် ပျောက်နေတယ် … ဥပမာ မြက်ရိုင်းပင်တွေ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံသုံးပုံ
အပင်တွေ အများကြီးပေါက်နေတာ . လှနေတာတော့မှန်တယ် ..
ဦးစားပေးပြစရာ တစ်ခုတော့ လိုမယ် .. ဥပမာ ငှက်ကလေးတစ်ကောင် ၊ ပန်းလေးတစ်ပွင့် ၊ မြက်ပင်တွေကြားထဲက မျိုးမတူတဲ့ အပင်လေးတစ်ပင် စသည်ုဖြင့် ပါလာရင် ပုံလေးက ပိုကောင်းသွားမယ်ခင်ဗျ …
ပြချင်တဲ့ အိုင်ဒီယာနဲ့မဆိုင်တဲ့ အရာတွေ ပုံထဲပါလာတာ ပုံပျက်သွားစေတယ် ခင်ဗျ ..
ဖိနပ်ပုံလေးမှာ ဘေးက အမှိုက်စ ပါလာတာ အထီးကျန်ခြင်းဆိုတဲ့ ရသ ပျောက်သွားစေတယ် …
အဲဒီအမှိုက်လေးမပါရင် ဖိနပ်လေးရဲ့ အထီးကျန်ခြင်းက ပိုပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ် .။
နောက် ချောင်းသာနေ၀င်ချိန်ပုံ …
နေ၀င်ချိန်မှာ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ ရသကို ခံစား ရသင့်တယ် …….
ဒါပေမယ့် ပုံမှာပါတဲ့ နှစ်ယောက်က active ဖြစ်လွန်းနေတယ် .. ။ သူတို့နှစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ
စုံတွဲလေးတစ်တွဲ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်နေရင် အဲဒီ့ပုံ ရိုမက်တစ်ပဲ …။ shape အနေနဲ့ပဲ စုံတွဲကိုပြပေါ့ …။
အပြုသဘောနဲ့ ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်နော …..
Blackchaw ရေ ….
အပေါ်ဆုံးက ပုံအတွက် ဇာတ်လမ်း အတိုအထွာလေးတော့ ရေးပြီးသွားပြီဗျို့။
ဒီနေ့ (၅.၁.၂၀၁၂) နေ့မှာ Post အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါပြီ။